१० करोड वर्ष सुतेको ‘कुम्भकर्ण’ ब्याक्टेरिया!:: Naya Nepal
१० करोड वर्ष सुतेको ‘कुम्भकर्ण’ ब्याक्टेरिया!
इजिप्ट लगायत केही मध्य पूर्वी देशमा कुनै मृत व्यक्तिको कारणवस शरीर कुहिएन र रहिरह्यो भने त्यसलाई ‘ममी’ भएको मानिन्छ। वा पहिलेपहिले कुनै विशेष मान्छेका शरीर ‘ममी’ बनाएर पनि राखिन्थ्यो।
यी त भए फिल्मका कुरा। के तपाईंलाई यस्तै मृत समान ‘ममी’ जीवित भयो भन्दा पत्यार लाग्छ? फिल्ममा होइन, साँच्चै संसारमा १० करोड वर्षअघि ‘ममी’ बनेका वा भनौं निदाउन पुगेका जीव अहिले जीवित हुन सक्लान्?